ရွှေဘိုမြို့ ၌ မိုးစပါးလှိုင်လှိုင် ပေါ်နေသော်လည်း ဈေးနှုန်း ကျဆင်းခြင်း မရှိဘဲ ဝယ်လိုအား ကောင? - Yangon Media Group
ရွှေဘိုမြို့ ၌ မိုးစပါးလှိုင်လှိုင် ပေါ်နေသော်လည်း ဈေးနှုန်း ကျဆင်းခြင်း မရှိဘဲ ဝယ်လိုအား ကောင?
ရွှေဘို၊ ဇန်နဝါရီ ၁၆
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရွှေဘိုခရိုင်၌ မိုးစပါးဖြစ်သည့် ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းမွှေး လှိုင်လှိုင်ပေါ်နေသော်လည်း စပါး ဈေးနှုန်းကျဆင်းခြင်းမရှိဘဲ ဝယ်လိုအားကောင်းနေမှုကြောင့် စံချိန်တင်အမြင့်ဆုံးဈေးဖြင့် ပုံမှန်ရပ်တည် ရောင်းဝယ်လျက်ရှိနေကြကြောင်း ဒေသခံတောင်သူများထံမှ သိရသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရွှေဘိုခရိုင်ဒေသသည် မိုးကောင်း သောက် (မိုးရွာရေ) လယ်မြေနှင့် သဖန်းဆိပ်ဆည်ဖြင့် လယ်မြေဧက ငါးသိန်းကျော်ကို စိုက်ပျိုးခဲ့ရာတွင် ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းမွှေးစပါးများကို အဓိကထား၍ ဧကတစ်ဝက်ကျော်အထိ စိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည်။
”ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းမွှေးစပါး စ ပေါ်ပေါ်ချင်း တင်းတစ်ရာကို ယခင်နှစ်က ငွေကျပ်ရှစ်သိန်းခွဲဝန်း ကျင်ရှိခဲ့ပေမယ့် ဒီနှစ်စပါးလှိုင် လှိုင်ပေါ်နေပေမယ့်လည်း စပါး ဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုမရှိဘူး။ ဝယ်လိုအားကောင်းနေလို့ စံချိန်တင်အမြင့်ဈေးဖြစ်တဲ့ ကျပ် ၁၂ သိန်း ဝန်းကျင်ဈေးနဲ့ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲ ခြင်းမရှိဘဲ စပါးပွဲစားတွေကပုံမှန် ဝယ်ယူနေကြပါတယ်”ဟု ခင်ဦးမြို့ နယ် ကန်သစ်ကျေးရွာမှ တောင်သူဦးသန်းထွန်းက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါဒေသ၌ ရွှေဘိုပေါ် ဆန်းမွှေးစပါးကို ဆန်အဖြစ်ကြိတ် ခွဲရောင်းချခြင်းကို အဓိကအားထား၍ မလုပ်ဆောင်ကြဘဲ ယခင်နှစ်က ကဲ့သို့ စပါးတင်းတစ်ရာလျှင်ငွေကျပ် ၁၆ သိန်းထိ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့သည်ကို မျှော်ကိုး၍စပါးများကိုဝယ်ယူစုဆောင်းကာ သိုလှောင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ရွှေဘိုဒေသ၌ ပေါ် ဆန်းမွှေးဆန်အသစ် ၂၄ ပြည်ဝင် တစ်အိတ်လျှင် ဆန်အရည်အသွေးအလိုက် ကျပ် ၃၅ဝဝဝ ဝန်းကျင်၊ ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းမွှေးဆန်အဟောင်း တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၆ဝဝဝဝ ဝန်းကျင်၊ ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းမွှေးစပါးအ ဟောင်းတင်းတစ်ရာလျှင် ကျပ် ၁၆ သိန်းဝန်းကျင်နှင့် အသစ်ကို ကျပ် ၁၂ သိန်းဝန်းကျင်ဈေးဖြင့် အရောင်း အဝယ်ဖြစ်နေကြောင်းသိရသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မ??